डचटाउन लाभांश, भोल्युम एक • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
डचटाउन लाभांश, भोल्युम एक
प्रकाशित फेब्रुअरी 15th, 2022
डचटाउन व्यापार समुदायको लागि त्रैमासिक न्यूजलेटर, डचटाउन लाभांशको पहिलो अंकमा स्वागत छ! हामी तपाईलाई के भइरहेको छ भन्ने बारे जानकारी गराउन यहाँ छौं डचटाउन मुख्य सडकहरू र तपाईलाई स्थानीय व्यवसायहरूमा उपलब्ध स्रोत र अवसरहरू बारे जानकारी गराउन। यदि तपाईं आफ्नो इनबक्समा यी अपडेटहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई इमेल गर्नुहोस् info@dutchtownstl.org.
हाम्रो राष्ट्रपतिबाट एक परिचय
नमस्ते डचटाउन व्यापार समुदाय!
म नेट लिन्डसे हुँ, डचटाउन मेन स्ट्रिटको अध्यक्ष। जब मैले तपाईहरु मध्ये धेरैलाई वर्षौंदेखि चिनेको छु, म औपचारिक रूपमा आफ्नो परिचय दिन उत्साहित छु (विशेष गरी मैले राम्रोसँग नचिनेकाहरूलाई) र मेरो कामको बारेमा केही जानकारी प्रदान गर्न डचटाउन मुख्य सडकहरू। डचटाउन डिभिडेन्डको पहिलो संस्करणको माध्यमबाट यो गर्न पाउँदा म विशेष रूपमा उत्साहित छु, विशेष गरी हाम्रो साना व्यवसायी समुदायका लागि त्रैमासिक प्रकाशन।
म सेन्ट लुइसमा प्रत्यारोपण गर्दैछु। मेरो गृहनगर लरेन्स, कन्सासको युनिभर्सिटी अफ कन्सास स्कूल अफ ल बाट स्नातक गरेपछि, मैले आफ्नो क्यारियर एक सहयोगीको रूपमा सुरु गरें। रस्मुसेन डिकी मूरको कन्सास सिटी अफिस र दुई छोटो वर्ष पछि मलाई नयाँ अफिस शाखा खोल्नको लागि सेन्ट लुइस जाँदै गरेको पाए। सेन्ट लुइस र म्याडिसन काउन्टी, इलिनोइस लगायतका क्षेत्रका मुकदमेबाजी हटस्पटहरूमा ग्राहकहरूलाई सेवा दिनको लागि हाम्रो फर्मलाई अझ राम्रो स्थितिमा राख्न म यहाँ आएको हुँ। मेरो अभ्यासमा व्यवसाय र पेशेवरहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समावेश छ जब उनीहरूमाथि मुद्दा दायर हुन्छ वा अन्यथा कानुनी परामर्श आवश्यक हुन्छ।
कन्सास सिटी क्षेत्रमा मेरा सबै साथीहरू र परिवारबाट टाढा गएको केही समयपछि, मैले मेरी श्रीमती स्टासी हार्भाटिनलाई भेटें। म एउटा लफ्ट डाउनटाउनमा बसिरहेको थिएँ र स्टासीको सेन्ट मेरी हाई स्कूल नजिकै डचटाउनमा एउटा घर थियो। लामो कथा छोटो बनाउनको लागि, Staci र म प्रेममा पर्यौं र डचटाउन छिमेकमा समर्थनले घेरिएको हाम्रो परिवार सुरु गर्यौं। सुरुमा, त्यो हाम्रो चर्च मार्फत थियो पादुआको सेन्ट एन्थोनी, तर हामीले चाँडै डाउनटाउन डचटाउन, व्यापार संघ, र त्यसपछि यस क्षेत्रका धेरै व्यवसाय मालिकहरू र छिमेकीहरूसँग जडानहरू बढाएका छौं।
हामीले के फेला पार्‍यौं भनेको निर्माणकर्ता र आशाले भरिएको समुदाय हो। डचटाउनका चुनौतिहरू र धेरै दशकहरूको विनिवेशको बावजुद, डचटाउनमा बस्ने मानिसहरू सधैं एकअर्काको खोजीमा थिए र संघर्षरत समुदायलाई खडा गर्ने प्रयासमा थिए। यही कारणले गर्दा हामीले यहाँ हाम्रो परिवारलाई हुर्काउन प्रतिबद्ध छौं - किनभने हामी साँच्चै विश्वास गर्छौं कि हाम्रा छिमेकीहरू एकअर्काको लागि दया र संकल्पमा अद्वितीय रूपमा अविश्वसनीय छन्। डचटाउन हाम्रो घर हो किनभने यो निर्माणकर्ताहरू मिलेर बनेको छ, र फलस्वरूप यो एउटा ठाउँ हो जहाँ हामी हाम्रो जीवन निर्माण गर्न चाहन्छौं। फलस्वरूप, Staci र मैले Meramec र Louisiana को कुनामा एउटा खाली घर पुनर्वास गरेर छिमेकमा हाम्रो पहिलो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता बनायौं। कुनै हिचकिचाहट बिना, हामीले यसलाई हाम्रो "सदाको लागि घर" भन्यौं। आउँदो वर्षहरूमा, हामीले हाम्रा दुवै आमाहरूलाई डचटाउनमा सार्यौं र हाम्रा दुई छोराहरू थाडियस र फ्रान्सिसलाई पनि स्वागत गर्यौं।
2016 देखि, म पहिले डाउनटाउन डचटाउन बिजनेस एसोसिएशन (501(c)(3) को पारित भएपछि सक्रिय भएको छु। डचटाउन सीआईडी, र अहिले को रूपमा चिनिन्छ डचटाउन मुख्य सडकहरू)। म हाल बोर्ड अध्यक्ष र हाम्रो आर्थिक जीवन्तता समितिको सह-अध्यक्षको रूपमा सेवा गर्दछु। डचटाउन इकोनोमिक विटालिटी कमिटीले डचटाउनको अवस्थित व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिलाई सुदृढ पार्नुका साथै नयाँ लगानीको साथ हाम्रो आर्थिक आधारलाई विस्तार र विविधीकरणमा केन्द्रित गर्दछ।
त्यो दिमागमा, म उद्घाटन डचटाउन लाभांश पढ्नको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। डचटाउन लाभांश आर्थिक जीवन्तता समिति द्वारा त्रैमासिक प्रकाशित प्रकाशन हुनेछ। हाम्रो लक्ष्य दुई गुणा हुनेछ: (1) डचटाउन मुख्य सडकहरूले के काम गरिरहेको छ भन्ने बारे हाम्रो साना व्यवसायी समुदायलाई जानकारी गराउन र (2) हाम्रो साना व्यवसायी समुदायका लागि उपलब्ध साना व्यापार स्रोतहरू र अवसरहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न। साना व्यवसाय मालिकहरूको रूपमा, तपाईं सबै डचटाउन र डचटाउन मुख्य सडकहरूमा स्टकको मालिक हुनुहुन्छ। तपाईंको कामको लागि धन्यवाद, तपाईंको समयको लागि धन्यवाद, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले हाम्रो व्यवसाय र छिमेकीहरू सँगै फस्टाउने डचटाउनको भविष्यमा साझा गर्ने आशाको लागि धन्यवाद।
पढ्नको लागि धन्यवाद!
राष्ट्रपति, डचटाउन मुख्य सडकहरू
डचटाउन मुख्य सडक व्यापक कार्य योजना
डचटाउन मुख्य सडकहरू 2022 मा आफ्नो पहिलो व्यापक कार्य योजना लागू गर्न अविश्वसनीय रूपमा उत्साहित छ। तपाईं पूर्ण विस्तृत योजना यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यो लिंक, तर हामी प्रत्येक आगामी परियोजनाहरु को केहि हाइलाइट गर्न चाहन्थ्यौं डचटाउन मुख्य सडक समितिहरू 2022 को पहिलो क्वाटरमा र त्यसपछि काम गर्नेछ!
प्रवर्द्धन समितिले काम गर्नेछ डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन अर्कोमा डच जानुहोस्! घटना जहाँ हामी पहिलो पटक घर खरीददारहरू तिर नजर राखेर घर जग्गा अवसरहरूको सह-प्रवर्द्धन गर्नेछौं! डचटाउन युवा परिवारहरूका लागि स्टार्टर होमहरूको लागि एक अविश्वसनीय ठाउँ हो जुन यसको किफायती छ र हामी डचटाउनमा स्वामित्व लिन चाहने भाडामा लिनेहरूलाई त्यसो गर्नका लागि स्रोतहरू फेला पार्न प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं!
थप रूपमा, प्रवर्द्धन समितिले २०२१ मा हामीले देखेको धेरै सफल फुटपाथ बिक्री जारी राख्न हाम्रा साना व्यापार साझेदारहरूसँग काम गर्न पनि इच्छुक छ। यदि तपाईंलाई आफ्नो खुद्रा-सम्बन्धित कार्यक्रममा राख्नको लागि प्रवर्धन समितिबाट ग्राफिक्स, विज्ञापन वा अन्य मद्दत चाहिन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोस् पदोन्नति @dutchtownstl.org.
डिजाइन समितिले मिनी-फेसेड अनुदान कार्यक्रम सुरु गर्दैछ। उनीहरुको सहयोगमा सफा सडक निर्माणका लागि जारी रहेको कामलाई पनि निरन्तरता दिनेछन् डचटाउन सीआईडी, रोजगार जडानर छिमेकी सौन्दर्यीकरण टोली। हामी स्थानीय सफाईमा पनि व्यवसायहरूसँग साझेदारी गर्ने अवसरहरू खोजिरहेका छौं, त्यसैले यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ वा विचारहरू छन् भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्। Design@dutchtownstl.org.
थप हेर्दै, डचटाउन मुख्य सडकहरूले हाम्रो छिमेकको गौरव र चेतना बढाउन र नयाँ आगमनहरूलाई हाम्रो छिमेकी व्यवसाय र आकर्षणहरूमा निर्देशित गर्न यस वर्ष गन्तव्य ब्रान्डिङ र वेफाइन्डिङका लागि कोष खोज्नेछ।
आर्थिक जीवन समिति
आर्थिक जीवन्तता समितिलाई अब हाम्रा व्यापार छिमेकीहरूलाई डचटाउन लाभांशको त्रैमासिक अद्यावधिकको साथ चार्ज गरिएको छ—तपाईं अहिले यसलाई पढ्दै हुनुहुन्छ! समितिले हाम्रा स्रोतसाधनलाई निरन्तरता दिनेछ डचटाउन व्यापार मालिकहरू फेसबुक पेज पनि। हामी हाम्रो छिमेकीका केही व्यावसायिक रिक्त पदहरू म्यापिङ र मार्केटिङमा काम सुरु गर्न पाउँदा पनि उत्साहित छौं। मिसौरी मुख्य सडक जडान.
यस वर्ष पछि, आर्थिक जीवन्ततासँग साझेदारी गर्ने योजना छ लुथरन विकास समूह वसन्तमा स्थानीय रोजगार मेलामा। समितिले एक व्यापार गोलमेज कार्यक्रमको योजना पनि बनाइरहेको छ जसमा हामीले योजनाबद्ध "मलाई केहि सोध्नुहोस्" शैली परामर्शको लागि वित्तीय, कानुनी, र साना व्यापार स्रोतहरू ल्याउँछौं। यदि तपाइँसँग परामर्शदाताहरूको लागि विचारहरू छन् वा यसलाई कसरी सफल कार्यक्रम बनाउने बारे विचारहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ev@dutchtownstl.org.
अन्तमा, संगठन समितिले प्रवर्द्धन समितिको सहयोगमा २०२१ मा डचटाउन मेन स्ट्रिटहरूले के पूरा गर्यो भनेर हाइलाइट गर्दै वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दैछ। संगठन समितिले २०२२ का लागि नयाँ स्वयंसेवकहरू भर्ना गर्न पनि खोज्छ। यदि तपाईं कार्यक्रमहरूमा वा स्वयम्सेवा गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने। डचटाउन मुख्य सडकहरूको लागि टेबलिङ, तपाईं सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ संगठन@dutchtownstl.org.
आगामी डचटाउन घटनाक्रम
यहाँ डचटाउनमा चाँडै के हुँदैछ भन्ने केही हाइलाइटहरू छन्। चाहे तपाईं डचटाउन मुख्य सडकहरूमा संलग्न हुन खोज्दै हुनुहुन्छ वा केही रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो छिमेकमा गर्नको लागि प्रशस्त छ! भ्रमण गर्नुहोस् डचटाउन क्यालेन्डर आउँदै गरेको सबै कुरा हेर्न।
बुधबार, मार्च १६ बेलुकी ५:३० बजे • मानवताको लागि आवास, 3830 XNUMX१। दक्षिण ग्रान्ड
यदि तपाईं डचटाउनलाई घरमा कल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई कसरी बनाउने भनेर पत्ता लगाउनुहोस् डच जानुहोस्! आवास घटना। हामीसँग पहिलो पटक घर खरीद गर्नेहरू, कम र मध्यम आय भएका खरिदकर्ताहरू, भाडामा लिनेहरू, र डचटाउनमा जराहरू राख्ने बारे उत्सुक अरू कसैको लागि स्रोतहरू हुनेछन्।
भर्जिनिया एवेन्यू वसन्त फ्लिंग
शनिबार, अप्रिल २१, भर्जिनिया र लिबर्टीको VAL गार्डनमा दिनभर
ए संग वसन्त मनाउनुहोस् छिमेक-व्यापी ब्लक पार्टी! सबैलाई बारबेक्यू, पेय पदार्थ र सम्पूर्ण परिवारको लागि रमाइलोको लागि बाहिर आउन आमन्त्रित गरिएको छ।
डचटाउन समिति बैठक
यस समयमा, समितिका सबै बैठकहरू भर्चुअल हुने योजना छ। डचटाउनएसटीएल सोशल मिडिया पृष्ठहरूमा नजर राख्नुहोस् यदि व्यक्ति-व्यक्ति अवसरहरू पनि उपलब्ध हुनेछन्।
हरेक दोस्रो मंगलबार बेलुका ६ बजे (मार्च ८, र अप्रिल १२, मे १०)
मा Microsoft Teams मार्फत अनलाइन सामेल हुनुहोस् dutchtownstl.org/evmeeting
समितिलाई इमेल गर्नुहोस् ev@dutchtownstl.org
हरेक दोस्रो बिहीबार साँझ ६ बजे (मार्च १०, अप्रिल १४, मे १२)
मा Microsoft Teams मार्फत अनलाइन सामेल हुनुहोस् dutchtownstl.org/promomeeting
समितिलाई इमेल गर्नुहोस् पदोन्नति @dutchtownstl.org
हरेक तेस्रो मंगलबार बेलुका ६ बजे (मार्च १५, अप्रिल १९, मे १७)
मा Microsoft Teams मार्फत अनलाइन सामेल हुनुहोस् dutchtownstl.org/orgmeeting
समितिलाई इमेल गर्नुहोस् संगठन@dutchtownstl.org
हरेक तेस्रो बिहीबार बेलुका ६ बजे (मार्च १७, अप्रिल २१, मे १९)
मा Microsoft Teams मार्फत अनलाइन सामेल हुनुहोस् dutchtownstl.org/designmeeting
समितिलाई इमेल गर्नुहोस् Design@dutchtownstl.org
छिमेकी व्यापार घटनाक्रम
डाउनटाउन डचटाउनमा हरेक शनिबार
प्रत्येक शनिबार मिनी-त्योहारको लागि डाउनटाउन डचटाउन भ्रमण गर्नुहोस्! डाउनटाउन डचटाउनका एक्लेक्टिक पसलहरू किनमेल गर्दा र अर्बन ईट्स नेबरहुड फूड हलमा अनौठो भोजनालयहरूबाट खाजामा चाउ डाउन गर्दा प्रत्यक्ष मनोरञ्जनको आनन्द लिनुहोस्। व्यापारीहरूले उत्पादन प्रदर्शन, नमूनाहरू, र गतिविधिहरू प्रस्ताव गर्नेछन्।
वसन्त फुटपाथ बिक्री
शुक्रबार, मार्च 25 र शनिबार, मार्च 26 डाउनटाउन डचटाउनमा
दोस्रो वार्षिक स्प्रिंग फुटपाथ बिक्रीको लागि Meramec Street को व्यापारीहरूसँग सामेल हुनुहोस्! किनमेल र विशेष सम्झौताहरूको अतिरिक्त, त्यहाँ र्याफलहरू र पुरस्कारहरू, सामुदायिक स्रोतहरू, बालबालिकाका गतिविधिहरू, र थप कुराहरू पनि हुनेछन्। डाउनटाउन डचटाउन शुक्रवार र शनिबार 10am देखि 5pm सम्म पसल गर्नुहोस्।
अन्य उल्लेखनीय घटनाहरू
टेक समर्थन क्याफे
शनिबार, अप्रिल 14, 10am देखि 2pm • Thomas Dunn Learning Center
ल्यापटप ढिलो छ? ट्याब्लेट समस्या? फ्रिजमा फोन? आउनुहोस् फ्रीसोर्सको टेक सपोर्ट क्याफे नि:शुल्क पियर-टू-पियर आईटी समर्थनको लागि। तपाईंका यन्त्रहरू चलिरहेको राख्नुहोस्, समस्याहरू समाधान गर्ने तरिका जान्नुहोस्, र तपाईंका ग्याजेटहरू र सुविधाहरू कसरी काम गर्छन् भन्ने बारे थप जान्नुहोस्। थप यहाँ पत्ता.
यो डचटाउन गर्मी Vibes सडक महोत्सव शनिबार, जुन4मा डाउनटाउन डचटाउनमा फर्कदैछ! किनमेल, प्रत्यक्ष संगीत, खाना र पेय, र धेरै, धेरैको लागि हामीसँग सामेल हुनुहोस्। यदि तपाईंको व्यवसायले कार्यक्रमलाई प्रायोजित गर्न वा अन्यथा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस् पदोन्नति @dutchtownstl.org.
डचटाउन चलचित्र रातहरू यस गर्मीमा मार्क्वेट पार्कमा पनि फर्किनेछ! प्रायोजन अवसरहरू उपलब्ध छन्। फेरि, सम्पर्क गर्नुहोस् पदोन्नति @dutchtownstl.org थप पत्ता लगाउन।
डचटाउन मुख्य सडक लक्षित क्षेत्र
हाम्रो साझेदारीको भागको रूपमा मिसौरी मुख्य सडक जडान र सेन्ट लुइस मुख्य स्ट्रीट्स पहल, डचटाउन मुख्य सडकहरूले हाम्रो आर्थिक विकास कार्यको लागि लक्षित जिल्ला विकास गर्यो। यो लक्ष्य क्षेत्र सेट गरेर, हामीले हाम्रो बृहत् कार्य योजना लागू गर्दा हामीले बल र आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्न सक्छौं र परिणामहरू मापन गर्न सक्छौं। लक्षित क्षेत्रले व्यावसायिक गतिविधि, पेशा र रिक्तता, सार्वजनिक र निजी लगानी, र अन्य प्रमुख सूचकहरूमा डेटा सङ्कलन गर्न आधारभूत स्थापना गर्दछ। त्यो डाटाको साथ, हामी डचटाउन समुदायलाई अझ राम्रो सेवा गर्न हाम्रा सेवाहरू र कार्यक्रमहरूलाई सुधार गर्नेछौं।
लक्षित क्षेत्र डचटाउनको मुख्य व्यावसायिक कोरिडोरहरूमा फैलिएको छ — मेरामेक स्ट्रीट, भर्जिनिया एभिन्यू, र साउथ ग्रान्ड बुलेभार्ड — र डाउनटाउन डचटाउनको वरिपरि केन्द्रित छ, ऐतिहासिक व्यापार जिल्ला मेरामेक र भर्जिनियाको चौराहेको वरिपरि केन्द्रित छ।
तर यो ध्यान दिनुपर्छ कि यदि तपाईंको व्यवसाय वा निवास तोकिएको लक्षित क्षेत्रमा अवस्थित छैन भने, डचटाउन मुख्य सडकहरू तपाईंलाई मद्दत गर्न यहाँ छन्! चाहे तपाईं डाउनटाउन डचटाउनको मुटुमा लामो समयदेखि व्यवसायको मालिक हुनुहुन्छ, चिपेवामा नयाँ अपस्टार्ट उद्यम, वा ग्रेटर डचटाउनको जुनसुकै ठाउँबाट इच्छुक बासिन्दा, हामी तपाईंसँग एउटा सम्पन्न छिमेक र साझा समृद्धि निर्माण गर्न साझेदारी गर्न उत्साहित छौं। सबैको लागि। हामी विश्वास गर्छौ डचटाउनको प्रत्येक सडक मुख्य सडक हो.
ह्यारिस-स्टोवे र PNC कालो उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न टोली
Harris-Stowe स्टेट विश्वविद्यालय बाट $450,000 अनुदान प्राप्त गरेको छ PNC फाउंडेशन ई स्थापना गर्न3 PNC द्वारा संचालित, उद्यमशीलता र आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्रवर्द्धन गरेर कालो-स्वामित्व भएका स्टार्टअपहरूले सामना गर्ने असमानताहरूलाई कम गर्ने उद्देश्य राखेको पहल। कार्यक्रम Harris-Stowe's मा राखिनेछ उन्नतिका लागि अल्पसंख्यक उद्यमशीलता सहयोगी केन्द्र (MECCA), नवाचार र उद्यमशीलताको लागि विश्वविद्यालयको नयाँ केन्द्रको अंश।
यस अनुसार STL 2030 रोजगार योजना, यी आर्थिक खाडलहरू बन्द गर्नाले सेन्ट लुइसको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यदि ब्ल्याक सेन्ट लुइसन्सले गोरा बासिन्दाहरूको समान दरमा व्यवसायहरू स्थापना गरे भने, यसले 8,000 नयाँ व्यवसायहरू र 66,000 रोजगारीहरू सिर्जना गर्नेछ।
यद्यपि, अमेरिकाभरि, उद्यम कोषको 2.4% मात्र कालो वा ल्याटिनो व्यक्तिहरूले स्थापना गरेका स्टार्टअपहरूमा गए। "यो सहकार्यले सेन्ट लुइसको स्टार्टअप वातावरण भित्र अवसरहरू र अर्थपूर्ण परिवर्तन खेती गर्न मद्दत गर्नेछ," सेन्ट लुइसका लागि PNC क्षेत्रीय अध्यक्ष माइकल स्कलीले भने।
ई द्वारा प्रदान गरिने सेवाहरू3 PNC द्वारा संचालित:
व्यापार योजना, मार्केटिङ, र वित्तीय व्यवस्थापन मा शिक्षा र प्रशिक्षण
पिच प्रशिक्षण र प्रतियोगिताहरू
अल्पसंख्यक उद्यमशीलता-केन्द्रित घटनाहरू
अल्पसंख्यक हाई स्कूल र कलेज विद्यार्थीहरूको लागि वित्तीय शिक्षा
"HSSU उदीयमान उद्यमीहरू र सेवाविहीन समुदायहरूका भविष्यका व्यवसाय मालिकहरूको वृद्धिलाई बढावा दिन प्रतिबद्ध छ, र यो पहलले हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण मिशन पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ," डा. स्टेसी होलिन्स, डीनले भने। Harris-Stowe मा Anheuser-Busch स्कूल अफ बिजनेस.
पीएनसी बैंक भर्खरै घोषणा गरे $ 88 बिलियन सामुदायिक लाभ योजना। योजना भित्र, काला, न्यून आय भएका र मध्यम आय भएका समुदायका लागि आर्थिक सशक्तिकरण पहलहरू बढाउन $1 बिलियनको वाचा गरिएको छ।
बहुसंख्यक कालो, कम आय भएको छिमेकको रूपमा, हामी सम्भावित प्रभाव देख्न उत्साहित छौं3 PNC पहल द्वारा संचालित डचटाउन ल्याउन सक्छ। डचटाउन मुख्य सडकहरू हाम्रा छिमेकीहरूलाई हाम्रो छिमेकमा फस्टाइरहेको व्यवसायहरू स्थापना गर्न सशक्त बनाउने लक्ष्य साझा गर्दछ, र हामी डचटाउनमा पसल स्थापना गर्ने अवसरहरू खोज्न मद्दत गर्न तयार र इच्छुक छौं। अगाडि बढ्दै, हामी उनीहरूको वरपरको समुदायलाई उठाउन PNC सँग नजिकबाट काम गर्ने आशा गर्दछौं दक्षिण ग्रैंड शाखा.
ह्यारिस-स्टो द्वारा फोटो पल सेबलम्यान.
तल दायर गरिएको डचटाउन लाभांश. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन लाभांश र डचटाउन मुख्य सडकहरू. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो फेब्रुअरी 15th, 2022 .
डचटाउन STL.org डचटाउन लाभांश डचटाउन लाभांश, भोल्युम एक